Isamsung i-Samsung J8, iselfowuni efikelela kwii-intshi ezi-6 kunye nekhamera esemva kabini | Iindaba zeGajethi
Isamsung inenye yeekhathalogu ze smartphones ebanzi kwicandelo. Njengoko sele usazi kangangeminyaka, amaKorea aneentsapho ezahlukileyo kwicandelo, i "S" kunye ne "Qaphela" ibe sisiphelo esiphakamileyo. Nangona kunjalo, kangangexesha elithile ngoku besinosapho luka "J", izixhobo ezihamba phakathi kwenqanaba lokungena kunye naphakathi, apho kufuneka sidibanise ilungu elitsha: Samsung Galaxy J8.
Okwangoku izakuthengiswa eIndiya, nangona kunokwenzeka ukuba le nto iyakushiya le mida kwaye inokubonwa kwiimarike ezininzi. Okwangoku, into yokuqala eya kuthi ibambe ingqalelo yakho malunga nale Samsung Galaxy J8 bubungakanani bayo bekhusi. Le inayo I-intshi ezi-6 idiagonal, nangona isisombululo sayo sisezantsi: 1.480 x 720 pixels, njengoko sinokubona kwisango Fonearena.
Ngokubanzi ngaphakathi, i-Galaxy J8 inayo Iprosesa ye-Octa-core Snapdragon 450 Inkqubo kwi-1,8 GHz frequency kwaye ikhatshwa yimemori ye-RAM ye-4 GB kunye nendawo yokugcina yangaphakathi efikelela kuma-64 GB. Ewe ungasebenzisa amakhadi e-MicroSD afikelela kuma-256 GB ngaphezulu.
Ngokunjalo, ikhamera ephambili yeli qela nayo inomdla. Kwaye, njengakukukhutshwa okuninzi okwangoku, le iya kuba neelensi ezimbini ezingasemva: Iimegapixels ezili-16 kunye nee-megapixels ezi-5 Ukuchaneka ngakumbi. Ngelixa ikhamera yayo yangaphambili, ijolise njengoko usazi ngeefowuni zevidiyo kunye uqoboIya kuba nee-megapixels ezili-16 zesisombululo.
Ngokuphathelele ibhetri yayo kunye nenkqubo yokusebenza, i-Samsung Galaxy J8 isekwe kuyo I-Android 8.0 Oreo kunye nebhetri yayo Iimitha ezingama-3.500. Uya kuba ne-SIM slot ezimbini, uqhagamshelo lwe-4G, unomathotholo we-FM kunye nomfundi ofaka iminwe ngasemva.
Ixabiso lesiphelo yi-18.990 Indian rupies, eyaguqulela kwi-euro iya kuba: Ama-euro angama-237 kwinqanaba lokutshintshiselana ngoku. Ukukhutshwa kwayo kuya kuba phakathi kwenyanga kaJulayi, ngaphandle kosuku oluchanekileyo, nangona besitshilo, kunokwenzeka ukuba esi sigxina siya kufikelela kwezinye iindawo zehlabathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Samsung Galaxy J8, iselfowuni efikelela kwii-intshi ezi-6 kunye nekhamera esemva kabini
Uber ukuvula iZiko leTekhnoloji ePhambili eParis
I-Thrustmaster Y-300CPX Far Cry 5 Edition, sivavanye ezi ntloko zemidlalo kubathandi be-saga